Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Mweghachi na Ntugharị! | Martech Zone
Ị maara nke ahụ naanị 2% nke ndị ọbịa na-azụ ahịa mgbe ha gara na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na nke mbụ ya? N'ezie, 92% nke ndi ahia emela atụmatụ ịzụrụ mgbe ị gara na ụlọ ahịa na ntanetị maka oge izizi. Na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa ndị bu n'obi ịzụta, hapụ ụgbọ ibu azụmahịa.
Legharịa anya n'àzụ ahịa gị n'ịntanetị ma ị ga-ahụkarị na ị na-agagharị ma lelee ngwaahịa dị n'ịntanetị, mana hapụzie ka ị lelee ndị asọmpi, chere ụbọchị ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ naanị gbanwee obi gị. Nke ahụ kwuru, ọ bụ na ụlọ ọrụ kachasị mma ịchụso gị ozugbo ị gara saịtị n'ihi na ị gosipụtara omume na-egosi na ị nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. A maara nchụso ahụ dị ka nlọghachi azụ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ na-echegharị ihe.
Usoro mgbasa ozi dị ka Facebook na Google Adwords na-enye gị edemede iji tinye na ebe nrụọrụ weebụ gị. Mgbe onye ọbịa bịara na saịtị gị, edemede na-ebudata kuki na ihe nchọgharị mpaghara ha ma bulie pikselị nke na-eziga data na ọkwa mgbasa ozi. Ugbu a, ebe ọ bụla onye ahụ gara na weebụ nke etinyere otu usoro mgbasa ozi ahụ, enwere ike igosipụta mgbasa ozi iji gbalịa ichetara ha ngwaahịa ma ọ bụ saịtị ha na-ele.
O yikarịrị ka ị hụla nke a mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị. Look na-ele ọmarịcha akpụkpọ ụkwụ na saịtị wee pụọ. Mana ozugbo ịpụ, ị na-ahụ mgbasa ozi maka akpụkpọ ụkwụ na Facebook, Instagram, na mbipụta ndị ọzọ n'ịntanetị. Nke ahụ pụtara na saịtị ntanetị e-commerce etinyela mkpọsa iji weghachite ego. Ichighari ndi nleta di ugbua nwere otutu nloghachi di elu karie igbali inweta onye obia, yabụ ndi ahia na eji usoro a oge nile. N'ezie, mgbasa ozi a na-akpọghachite nwere ike ịnweta ọnụọgụ 76% na Facebook karịa mgbasa ozi mgbasa ozi nkịtị.
Ma ọ bụghị naanị saịtị e-commerce nke ndị na-azụ ahịa nwere ike itinye mkpọsa iji weghachite. Ọbụna B2B na ụlọ ọrụ ọrụ na-ebugharị oge niile mgbe ndị ọbịa rutere na ibe ọdịda mkpọsa. Ọzọ, ha egosila na ha nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ… ya mere ọ dị mma ịchụso ha.
Argbaghagharị na imegharị mkpọsa nwere ike ịdị obosara ma ọ bụ kpọtụrụ aha na mmemme ụfọdụ.
Enwere ike iweghachite ndị ọbịa bịara na saịtị ma ọ bụ ibe. Nke a bụ Ihe ntughari pikselụ ma gosipụta naanị mgbasa ozi ka ha na-agagharị na weebụ.
Ọbịa ndị bidoro usoro ntụgharị site na ịdenye aha ma ọ bụ gbahapụ ụgbọ ibu azụmahịa. Nke a bụ ndepụta na-agbakwunye ndepụta ma nwee ike itinye mgbasa ozi ngosi ahaziri iche yana ekwentị na ozi email n'ihi na ị nwere njirimara nke atụmanya ahụ.
Retargeting vs. Ntughari
Ọ bụ ezie na a na-ejikarị okwu ndị ahụ eme ihe, retargeting a na-ejikarị kọwaa mgbasa ozi dabere na pixel na na-emegharị ahụ A na-ejikarị kọwaa mbọ ndị metụtara ndepụta iji weghachite ndị ahịa na azụmaahịa. Mgbasa ozi ụgbọ ahịa ahapụgoro na-enyekarị ọnụego ntụgharị kachasị elu ma laghachi na ntinye ego azụmaahịa.
Kedu ihe na-emegharịghachi omume?
Rudimentary retargeting bụ naanị ịkwanye mgbasa ozi na onye ọ bụla gara na saịtị ụfọdụ, ma ọ bụ hapụ usoro ndenye ọpụpụ na saịtị gị. Agbanyeghị, sistemụ nke oge a nwere ike ịlele omume nke ndị mmadụ n'otu n'otu ka ha na-agagharị na web. Ọnọdụ igwe mmadụ ha, ọdịdị ala ha, na ozi omume ha nwere ike itinye mgbasa ozi ahaziri iche na nke oge iji mee ka ohere ịtụgharị tụgharịa ma belata ọnụ ahịa mgbasa ozi zuru ezu.
Iva Krasteva na Ọrụ Azụmaahịa Dijitalụ, saịtị UK maka ịchọta ọrụ ịzụ ahịa dijitalụ, na-akọwa ụdị usoro retargeting na isiokwu ya na-adịbeghị anya, Nchịkọta Ọnụ ọgụgụ 99 Ntugharị Iji Gosipụta Mkpa Ọ Dị Maka Ndị Ahịa!
A nabatara ụdị a 26.1% nke oge.
Nke a na-arụ ọrụ site na ịmepụta mkpọsa email ebe onye ọ bụla pịrị na email gị ga-amalite ugbu a ịhụ mgbasa ozi gị. You nwere ike depụta aha nke email akọwapụtara iche ndị mmadụ na-ege ntị ma duru ha gaa na ihe ga-amasị ha na weebụsaịtị ha.
Emere nke a site na itinye koodu na HTML ma ọ bụ mbinye aka nke ozi ịntanetị gị.
Na saịtị na Dynamic Retargeting
A nakweere ụdị a ọtụtụ oge na ọnụego 87.9%.
Nke a bụ ebe onye na-azụ ahịa rutere na saịtị gị ma ị na-agbaso ndị na-eme nchọgharị ole na ole na-esote ka ha kụọ mgbasa ozi ahaziri nke ọma iji weghachite ndị ahịa.
A na-eme nke a site na iji kuki. Mgbe ndị ahịa kwenyere na kuki ha kwenyere ka ha nwee ike ịnweta nchọgharị ha. Enweghị ozi nkeonwe ọ bụla nwere ike ịnweta ma. Naanị adreesị IP na ebe adreesị IP ahụ na-achọ nwere ike iji.
Chọọ - Ntughari ndepụta maka mgbasa ozi ọchụchọ (RLSA)
A nabatara ụdị a 64.9% nke oge.
Nke a na-arụ ọrụ site na ndị na-ere ahịa ndụ, na igwe nyocha akwụ ụgwọ, na-eduzi ndị na-azụ ahịa na ibe aka nri na usoro mgbasa ozi dabere na nyocha ha.
Emere nke a site na ịlele onye pịrị na mgbasa ozi akwụ ụgwọ tupu ma dabere na ọchụchọ ị nwere ike weghachite ndị ahịa na mgbasa ozi ndị ọzọ iji duru ha na nduzi ịchọrọ ha.
Mgbasa ozi vidiyo na-abawanye site na 40% kwa afọ yana ihe karịrị 80% nke ịntanetị okporo ụzọ na-etinye vidiyo.
Nke a na-arụ ọrụ mgbe onye na-azụ ahịa na-eleta saịtị gị. Then ga-ahụzi omume ha n ’ọkwa ọ bụla nke ịzụ ahịa n’ime gị. Mgbe ha hapụrụ saịtị gị wee malite ịme nchọgharị ị nwere ike idowe usoro mgbasa ozi vidiyo na-echegharị. Enwere ike ịhazi nke a iji dozie ọdịmma nke ndị na-azụ iji mee ka ha laghachi na saịtị gị.
Ihe omuma ihe omuma a na-achoputa onu ogugu obula ichoro ima banyere imeghari, tinyere isi, otu ndi ahia si ele atumatu a anya, ihe ndi ahia chere banyere ya, iweghari votu na ntughari, otu o si aru oru na ihe nchoghari, otu o si aru oru na ngwa mkpanaka. nke ịghachigharị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịchigharị nke ọma, otu esi ahazighachi azụ, ebumnuche nke iweghachigha, yana iji ihe eji eme ihe.
Jide n'aka na ị gara Ọrụ Mgbasa Ozi Digital iji gụọ isiokwu niile, Nchịkọta Ọnụ ọgụgụ 99 Ntugharị Iji Gosipụta Mkpa Ọ Dị Maka Ndị Ahịa! - o nwere ọtụtụ ozi!
Tags: agbahapụ ịzụ ahịaọrụ dijitalụ ahịaọrụ dijitalụ dijitalụ ukpixel facebookotú nrụpụta ọrụ si arụ ọrụotú retargeting si arụ ọrụIva KrastevaNtughari ngwa mkpanakapixel dabeere na mgbasa ozina-emegharị ahụịghaghachi infographicvidiyo vidiyo